Arahaba sy fisaorana
Tompokolahy sy tompokovavy, rehefa afaka ny tsiny fanalan’ny vava, satria ny afa-kaka hono mahay mihomehy, ny afa-trosa afa-kenatra, fa ny afa-tsiny kosa, toy ny afa-drofy, tsy misy vato manoha-riana na volo-manoha-randrana intsony, fa mazava ny lalan-kombàna, tsy ho vahotra ny lela ary tsy hipararetra ny molotra, hanohy ny dinidinika sy ny resadresaka satria afa-tsiny.
Mialohan’ny zava-drehetra anefa, satria vidin-kaja, vidim-boninahitra, koa dia mamelà ahy hanolotra ny haja ho an’izay tokony hajaina, ary fisaorana ho an’izay tokony ankasitrahana, amin’izao andro iray toa zato izao.
Voalohany, avo tsy mihoatra ny lanitra, ambony tsy misy tahaka ny tendrombohitra, fa Andriamanitra mbola mihaotra lavitra. Tsy takatry ny saina Izy ho eritreretina, tsy tratry ny maso Izy ho banjinina, ny heriny tsy hay tohaina tahaka ny rivotra, ny fitiavany tsy manam-petra toy ny fara-vodi-lanitra. Ny vorona sy ny goaika hono tompoko, no velona, nefa sady tsy namafy no tsy nijinja, Andriamanitra no niahy, mainka fa isika olombelona, izay zanany sy asan’ny tanany, Tratry ny andro androany isiska, velona tra-pamonjena, satria notahian-Janahary, ka atolotra Azy ny saotra, asalotra Azy ny voninahitra. Hankalazaina mandrakizay anie ny anarany !
Manarak’izany, ny loha hono ananan-tompo, ny kibo ananan-kavana, fa isika kosa manana mpitondra ny tany sy ny fanjakàna. Izy ireny mantsy no vovonana iadian’ny lohany, varivariny andrian’ny tafo, andriana lehiben’ny tantely. Hodidinin’ny mamy mandrakariva anie izy ireny, handidy hahita ny vaniny, hikapa hahita ny tonony. Nefa kosa, mba tsy ho mamy hanina an-tanana, na sanatria hanao am-pihimamba, fa raha mahazo izy ireo hizara, raha tsy manana hitsetra. Mendrika azy ireny ny fisaorana sy fankasitrahana, satria tsy mandry andro, tsy mandry alina, ny fiheverana an’ity Nosy ity. Koa trarantitra aza marofy tompokolahy, ho ela fanapahana tompokovavy, hiadanan’ny ambanilanitra.
Etsy andanin’izany, tsy azo adinoina ireo foloalin-dahy, fa tolorana ny fisaorana sy ny salohy fito, izay tsy hafa fa tandroka aron’ny vozona, kofehy mando mitam-panjakàna, vavahady hidin’ny vohitra ary varavarana hidin’ny trano. Tsy ho resy tsy miady anie izy ireny sanatria, fa raha hanafika hahazo babo, ary raha tafihina tsy ho resy tosika. Koa misondrota voninahitra hatrany hianareo, ary mitomboa hery sy fahefàna, hiadanan’ny valala tsy mandady harona.
Farany, ho an’ny vahoaka tsivakivolo, izay tsy azo atao ambanin-javatra, isika izao no ala ravaky ny tendrombohitra, volo endriky ny loha, kintana ravaky ny lanitra. Hiadam-pinaritra anie isika rehetra, tsy hitsimpona ny latsaka toy ny akoho, fa hiondana ny mamy toy ny tantely. Tsy ho rovi-damba ririnina, na ho rava sarotro fahavaratra, fa hitady isika hahita, handondona isika hovohana, hangataka hahazo. Ho tahian’ny Avo indrindra anie ny valala tsy mandady harona rehetra.
166 votes. Moyenne 2.62 sur 5.
1. Malala | 26/04/2011
miharaba no voaloha-teny satria tonga tsy miarahaba hono naman'ny tezitra.mankasitraka ny amin'ny serasera toy izao satria hahazoana soa tokoa na ara-tsaina na ara-batana na ary indrindra ny ara-panahy. tsy hoan'ny kabary ihany no itenenako fa ny amin'ny lafiny rehetra. misaotra indrindra fa ianareo zao no lakana hisotroan-drano, sompitra hihinanam-bary, tany honenana ary natao valala fiandry fasana sy natao vorompotsy tsy mandao omby koa mankatelina tompokolahy.
2. RANDRIAMANANJARA Serge Aimé (site web) | 05/05/2011
Miarahaba anareo tompon'andraikitra tompoko!ny Tompo Andriamanitra anie hamaly soa anareo mety tokoa ny serasera toy izao satria mampitodika sy mampiverina indray ny toe po ny toe tsaina maha Malagasy ary ny indrindra ny toe mpanahy.Mahafinaritra tokoa fa mirary soa topoko...
3. Ranoro | 14/11/2011
Mankasitraka amin'ilay kabary fisaorana
4. Ranoro | 14/11/2011
5. Ity tompoko mba misy fanontaniana kely manitikitika: mazàna ny fahita eny amin'ny sehatra maro samihafa dia ny fiarahabana no mandeha alohan'ny fialana tsiny. Nefa misy sasi-teny izay manao hoe:" rehefa afaka ny tsiny fanala ny vava sy ny fondro fanala ny | 27/10/2015
6. Fitiavana | 22/08/2016
Misaotra e! Nitondra teny mamy sy ny zara azy
7. ratsimbazafy haritiana | 02/01/2017
ry tompokolahy sy tompokovavy ny tady mahazaka hono fitariana omby ny fantsona fitariana rano fa ny azafady kosa fitariana teny koh miala tsiny aminareo aho